लेख-रचना Archives - Page 8 of 8 - अन्नपूर्ण टाइम्स
आफ्नो असफलताको लागि महिलाको चरित्रमाथि प्रश्न उठाउनु तुच्छता हो
एकान्तमा भेटिएकी नारी न तिम्रो सिकार हो न त तिम्रो जिम्मेवारी !
सफलता के हो ?
कविता : तिम्रो मुक्त कण्ठले
अम्बिका गुरुङ तिम्रो नामको हर अक्षरहरु पढीरहे ! तिम्रो मुक्त कन्ठले बोलेको सुनी रहे ! तिम्रो त्यो छुल्याई हरकतहरुलाई सपक्क शब्दले ढाकिदिए ! तिम्रो मायाँमा कति ढाकछोपहरु गरिदिए ! तर तिम्रो बेमानी चालहरु थाहा पाउन सकिन मैले ! तिमीलाई चिन्न सकिन मैले अहिले थाहा पाउदैछु तिम्रो छुल्यापनहरु तिम्रो बेमानी चालहरु अब...
सरकारकाे शत्रु हाेईन पत्रकार !
ज्ञानु श्रेष्ठ , सरकारकाे विरुद्धमा लेख्छन् भन्ने डरमा पत्रकारकाे हात बाध्नेखालकाे विधेयक ल्याउने सरकार पत्रकार हाेईन पत्रुकार भन्दै नाककाे डाडी भाच्न कराेड बजेट विनियोजन गर्ने जनप्रतिनिधि । के पत्रकार सरकारकाे बन्धक हाे ? के सरकारकाे गलत गतिविधिलाई पत्रकारले चुपचाप समर्थन गर्नुपर्ने हाे ? के जनप्रतिनिधिले गरेका सबै काम ठिक छन्...
पौराणिक कथा: तिहार र बलिराजा
सत्य युगको कुरा हो पृथ्वीमा बलि नाम गरेका बढो प्रतापी, दानी राजा थिए । उनको भण्डार द्रब्यले सधै भरिपूर्ण भरिएको हुन्थ्यो । जो केही पनि माग्न गए खाली हात फर्काउदैनथे । उनको कीर्ति चारैतिर फैलिएको थियो । उनको यो प्रतापले स्वर्गको इन्द्र नै डगमगायो । त्यस पछि देवताहरूलाई साथ लिएर...
ययाति : यौन प्यासले निम्त्याएको बबन्डर
काठमाडौं : रुवाइ र संवादसँगै पर्दा खुल्छ। सुसारे शर्मिष्ठाले आफूलाई प्रहार गरेका अपशब्द सहन गाह्रो परेको गुनासो अर्की सुसारे स्वर्णलताले रुँदै रानी देवयानीलाई सुनाउँछे। यही दृश्यबाट सुरु हुन्छ शिल्पी थिएटरमा मञ्चन भइरहेको पौराणिक नाट ‘ययाति’। महाभारतको कथाका विश्वविजेता राजा ययातिको भोगविलासी चरित्रले निम्त्याएको बबन्डर नै यो नाटकको मुख्य विषय हो। ययातिले...
पर्वतारोहणमा पत्रकार महिला
काठमाडौं : ‘समानताका लागि बुलन्द आवाज’ भन्ने मूल नाराका साथ महिला पत्रकारको टोली सगरमाथा आरोहण गर्दैछ । यही क्रममा टोलीले शनिबार अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको छ । जीवन जिउने क्रममा मान्छेले सुख र दुःखका धेरै सगरमाथा चढेको हुन्छ । आफूहरू पनि महिलाका पक्षमा केही सहयोग गर्ने उद्देश्यका साथ सगरमाथाको आरोहण गर्न...
‘इन्द्रसरोवर काव्य उत्सव’ सम्पन्न
काठमाडौं: तालको बिचमा काव्‍य उत्सव सम्पन्न भयो। मकवानपुर जिल्लाको मार्खुमा 'पर्यटनका लागि साहित्य' भन्ने नारासहित मानव निर्मीत ताल इन्द्रसरोवरमा 'इन्द्रसरोवर काव्य उत्सव २०७४' सम्पन्न भएको हो। फागुन १८ र १९ गते तालको बिचमा कविहरुले डुंगामा बसेर कविता सुनाए। देश भरका करिब तीन दर्जन कविको उपस्थिती रहेको कार्यक्रममा डुंगाकै स्टेज बनाएर डुंगामै...
अध्यक्ष - घनश्याम श्रेष्ठ